Soomaalida iyo Maraykanku maxaa waayo aragnimo ah oo ay kala faa’iidaysan karaan?
Soomaaliya waxaa ka dhacay xukuumad la bedelay (Regime Change) in badan oo dadka Soomaaliyeed ka mid ah u arkayeen inay ahayd xaq weliba in xoog lagu bedelo maahee aanay jirin xeel kale oo lagu bedelo. Dadkaas Soomaaliyeed oo qaatay magacyo jabhadood ayaa waxay ku baaqeen in haddii aan si dhaqso ah loo bedelin xukuumadda Soomaaliya dhibaato aad u weyn gaysan doonto oo markaa waxay cadeeyeen hal ku dheg ah in aan talaabo laga qaadin ma aha mid aan dooran karno (inaction is not an option).
Waxyaabaha kale oo ay yiraahdeen waxaa ka mid ahaa dagaalka gurigiisa madaxtooyada ayaan ugu gaynaynaa oo guryaheena ku dagaalami mayno. Waxaa kale oo dadka loogu baaqay in dawlad fiican oo aan digtaatooriyad ahayn oo aan eexasho ku dhisnayn la dhisi doono.
Jabhadahaas oo muddo badan soo jiitamayay oo marba magac hor leh la baxayay iyo koox hor leh horboodayay ugu danbaytii waa ku guulaysteen in la rido xukuumaddii Maxamed Siyaad Barre – Regime Change!
Nasiib daro markii xukuumaddii la riday Jabhadihii riday maba diyaarin nidaamkii bedeli lahaa mana ka fikirin Soomaaliya Siyaad Barre dabadii!. Shacabkii sugayay barwaaqo iyo nidaam iyo weliba nidaam cadaalad ah waxaa asiibay oo wareeriyay dagaal sokeeye iyo gaajo, iyo fawdo(Chaos). Waxaa abuurmay wax aanay Soomaali weligeed xataa filanayn oo xataa xeerarkii hore ee Soomaalida ee dagaalka waa la jebiyay kufsi iyo bililiqo ayaa bilawday, barakicis iyo qax ayaa ku xigay, dadka aan hubaysneen iyo kuwii laga badnaa ee xeebaha degi jiray oo aan waxba galabsan ayaa cagta la mariyay.
Dhiigii qofka Soomaaliga ahaa ayaa raqiisay weliba 300,000 ayaa lagu tiriyaa inta macluul u dhimatay oo caruur u badan. Soomaaliya waxaa ay adduunka ku soo kordhisay magac la yiraahdo WARLORD oo aan galbeedka laga isticmaalin ilaa qarniyadii dhexe, isbaaro iyo kelmado kale ayaa mehrad noqotay. Dekadihii iyo garoonadii waddanka ayaa xiran ilaa iyo hadda. Xukumad bedeladii Soomaaliya (Regime Change) si fiican uma dhicin dadkii iyo dalkii oo dhan baa addunka ka suulay, dad badan oo aan waxba galabsan ayaa la dilay ama lagu xad gudbay oo Islaamnimadii Soomaalida sheegan jirtay ayaa la isweydiiyay xagee ka baxday?.
Dawlad la’aanta Soomaaliya waa la’eeday gaar ahaan koofurta –gaar ahaan caasimadda oo ayada gaartay in dadka nool nool la afduubo-dadkii xilkaska ahaa ama fiicnaana ay fara ku gabad noqdaan.(waxaan Ilaahay ka baryaynaa kuwa ku dadaalaya inay ammaanka wax ka qabtaan oo is abaalulay ilaahay ku guulaysiiyo-dadka Soomaaliyeed meelkasta ha joogaan waxaa la gudboon inay taageeraan kuwaas dadaalaya oo aysan xamar sidaas ku fiirsan!
Sidoo kale dawladda maraykanka ayaa shaaca ka qaaday inay bedelayso xukuumaddii Sadaam ee ciraaq ayadoo ku eedaysay inuu qatar ku yahay nabadda adduunka haddii la bedelona ay dadka reer ciraaq marka la xoreeyo ka raysan doonaan oo nidaam fiican iyo barwaaqo gaari doonaan .
Dawladda maraykanka ayaa la filayay inay hayso dawladdii ama nidaamkii ay ku bedeli lahayd Sadam Hussein intaanay dagaalka bilaabin hase yeeshee waxaa cadaatay in aanay nidaam dhaqso ah keenin oo wadankana waxaa ka dhacay bililiqo iyo fawdo(Chaos). Dawladda maraykanka ayaa hadda ku mashquulsan nidaanm dhisid iyo inay beesha caalamka ka caawiyaan xallinta ciraaq.
Farqiga waa maraykanku saaxiibo badan ayuu leeyahay iyo dhaqaale iyo cudud; Soomaaliduse saaxiibo ma leh dhaqaale lagu baahi tiro warlordska iyo maleeshiyooyinka hubaysan laguna kaafiyo ma leh sidaa darteed 13 sano ka dib iyo 14 shir weli waxba ma hirgelin- Soomaalidu ilaahay ayayse leedahay.
Maraykanku waxay ahayd inuu fiiriyo Soomaalia maxaa ka dhacay xukuumaddii markii la bedelay aydoo nidaamkii bedeli lahaa aan lahayn!
Soomaalida maraykanka waxa ay ka baran karaan wadaninimo, iyo sidii ay dagaalkii sokeeye uga gudbeen qarni iyo bar ku dhowaad ka hor, sidii ay uga soo gudbeen noloshii kala faquuqa ahayd (segregation) iyo cadaald darada dadka qaar lagu hayay siday uga gudbeen oo ay ka mid tahay cadaaladda guryaha, shaqada, waxbarshada, iyo ganacsiga inkastoo aan la oran karin maraykanku waa ay ka wada gudbeen marxaladahaas haddana waa arrin wax weyn laga qabtay. Ugu danbayntii sida maraykanku waxbarashada qasab ugu tahay caruurta ilaa ay ka gaarayaan 18 jir ayaa ah arrin wax ku ool ah.
Maraykanka inqilaab kama dhici karo jabhad hubaysanna waxba kama qaadi karto dadkana waxa ay leeyihiin oo ay yaqaanaan hab lagu bedelo dawladda markaa jirta haddii ay xumaato, dadkana dalkooda waa la jeclaysiiyay. Waxaa hadda mudan in laga hadlo hadii Soomaaliya dawlad loo soo dhiso sidee looga difaacaa dawladdaas jabhadii rabta in ay dumiso? Maxay dadweynaha ka yeelayaan haddii uu dal deris ah soo hubeeyo jabhad?
Soomaalida dawladda ku soo dhisayso Kenya haddayba hagaagto waxaa hadda la gudboon inay mustaqbalka fiiriyaan oo cadeeyaan in soomaalida garaad u leedahay inay dawlad noqon karaan oo ay beeniyaan fikradda ah waa reer guuraa oo aana weli u bislaanin dawladnimo oo 30 sano ayay kulal kufeen dawladdoodii ama inuu isticmaarka sii hayo ayay ahayd ee xornimada uma qalmaan. Mudanayaal afartaan qodob wax ka dhaha:
1) Maxaa waci gelin ah oo dadweynaha loogu talo galay siday u baran lahaayeen dastuurkooda si aan qofna qof kale u dulmin?
2) Maxaa wacyi gelin ah oo loo diyaaruyay dadka si ay wadaniyiin u noqdaan oo wadankooda u jeclaadaan
3) Maxaa wacyi gelin ah oo loogu talo galay inay dadka dawladooda ka ilaashadaan jabhad ama inqilaab militari- dadka waa in loo sheegaa sidii ay ka yeeli lahaayeen haddii ay duruufahan oo kale la soo darsaan
4) Maxaa wacyi gelin ah oo loogu talo galay dadku inay samayn karaan haddii ay dawladu ku xumaato.
Waa in aan helnaa dawladda adduunka ugu fiican si dhiigga iyo sharafta dadka Soomaaliyeed uu qaali u noqdaa.
Codsi: Si aan u baranno nidaamyada dawliga ee caalamiga ah. fadlan aan ka faa’iidaysanno aqoon yahannada Soomaaliyeed ee Dunida ku kala firirsan ayagoo noo soo gudbinaya dawladda ay ku hoos nool yihiin sida ay u shaqayso iyo waxa ay soo martay intii karaan kooda ah. FADLAN DALKA AAD KU NOOSHAHAY DAWLADIISU SIDEE U SHAQEYSAA?